सुनको मूल्य सामान्य घट्यो, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ हे’र्नुहोस्
Homeसमाचारसुनको मूल्य सामान्य घट्यो, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ हे’र्नुहोस्
April 5, 2021 admin समाचार 6590
नेपाली बजा’रमा सोमबार सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अ’नुसार आइतबार तोलामा ८७ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य सोमबार रु २०० घटेर तोलामा ८७ हजार २०० रुपैयाँमा का’रोबार भएको हो ।
यस्तै ते’जाबी सुन तोलामा ८६ हजार ७५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै सोमबार चाँदीको मूल्य पनि सामान्य गि’रावट आएको छ । आइतबार तोलामा १२४० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार १२३५ रुपैयाँमा का’रोबार भएको महासंघले जनाएको छ ।
यो पनि: सरकार निर्मा’णको ‘किङमेकर’ भूमिकामा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा आफ्नो पार्टीभित्र विवाद नरहेको बताएका छन् ।​ जसपा’बाट प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई दुईजनाको नाम चर्चामा आए पनि पार्टीले सहमतिका आधारमा एकै’जनाको नाम दिन सक्ने यादवले दाबी गरे । यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘जसपाले एउटा नाममा सहमति गर्छ । विवाद हुँदैन, हामीले पायौँ भने सहमतिमै व्यक्ति अ’गाडि सार्छौं।’
जसपा नेता याद’वसँग पछिल्लो सत्ता समीकरणमाथि केन्द्रित रहेर रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पा’दित अंश–के जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) ले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको हो ?दाबी भन्दा पनि पहिलो कुरा त विभिन्न विकल्पहरुमध्ये यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । सरकारको जहाँ’सम्म सवाल छ, अहिलेको वर्तमान सरकार बहुमतको सरकार हो । राजनीतिक रुपले प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको माओवादीले विरोध गरे पनि कानुनी र संवैधानिक रुपले सरका’रसँगै छ । र, यो सरकार बहु’मतको सरकार हो ।
अर्को कुरा, नेपाली काँग्रे’सले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेको छ । फेरि नेपाली काँग्रेसले हामीसँग त्यो अनु’रुपको कुनै संवाद गरेको छैन । उहाँहरुले आफै निर्णय गर्नुभयो तर त्यो निर्णय अनुसार अगाडि बढे’को देखिँदैन ।
त्यसैले जस’पाले प्रथमतः हामीसँग जुन दायित्वहरु छन्, आन्दोलनले उठान गरेका मुद्दाहरु छन्, यसमा एउटा सा’झा दृष्टिकोण बन्यो भने हामी सोच्न सक्छौँ । संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्‍यो । आन्दोलनका जुन घट’नाहरु भएका छन्, त्यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा एउटा साझा दृष्टि’कोण बन्नुपर्;यो ।
यो संसदीय राज’नीतिमा त गणितले काम गर्छ । त्यसैले विभिन्न विकल्पहरुमध्ये अहिले जसपाको नेतृत्व पनि एउटा वि’कल्प हुन सक्छ । यही आधारमा हामीले यो विकल्प दिएको हो । यसको मतलब हामी यो भएन भने राजनी’तिक प्रक्रियामै गतिरोध पुर्‍याउने हाम्रो सोचाइ होइन । विभिन्न विकल्पहरुमध्ये अब गठबन्धनको सरकार बन्ने हो भने यो गठबन्धनको नेतृत्व जसपालाई दिँदा मलाई लाग्छ एउटा सह’कार्यको वातावरण बन्छ र एकले अर्काको अस्तित्व स्वी’कारेको पनि सन्देश जान्छ ।
तपाईंले ‘गठब’न्धनको सरकार’ भन्नुभयो, गठबन्धन त दुईवटा बन्न सक्छन् । एमाले–जसपा गठबन्धन भन्न खोज्नु’भएको हो कि काँग्रेस–माओवादी–जसपा गठ’बन्धन ? कुन गठबन्धनको सम्भावना बढी छ ?
पहिले माओ’वादी केन्द्रले आफ्नो स्थिति क्लियर गरिसकेपछि मात्रै एमालेले गठबन्धनका लागि प्र’यास गर्ने हो या सहयोग माग्ने हो । माओवादीले सरकारलाई समर्थन गरिरहेको हुनाले अहिलेसम्म उसले (एमालेले) हामीसँग सहयोग मा’गेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओ’लीले महन्थ ठाकुरहरुसँग छलफल त गरिराख्नुभएको छ नि हैन र ? त्यो छलफल सरकारका लागि भएको होइन । हाम्रा मागहरुका बारेमा नेपाल सरकारसँग छ’लफल भएको हो । राज्यले गर्नुपर्ने जुन कामहरु छन् ती काम त अब सरकार जसको छ, उसँग संवाद त गर्नै पर्‍यो । त्यसैले तिनै मुद्दा’हरुमा अहिले कुराकानी अगाडि बढेको हो ।
त्यसो भए यहाँले ‘गठबन्धनको सरकार’ भनेर काँग्रेस–माओवादी–जसपा गठबन्धनकै कुरो गर्नुभए’को हो ? हैन, गठबन्धन त दुईवटै गठबन्धन हुन सक्छन् । केपी ओलीले जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रधा’नमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा छ नि ? खासमा, भित्री कुरो के हो ? अहिलेसम्म औपचारिक हिसाबले जानकारी आएको छैन । मिडियाले आफ्नो खपत’का लागि मात्रै चर्चा गरेको हो ।
तपाईंहरु जस’पाले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर प्रधानमन्त्रीका लागि महन्थ ठाकुर र डा. बाबुराम भट्टराई दुईजनाको नाम चर्चा आउ’नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्रीको नाममा पार्टीभित्रै किन सहमति बन्न नसकेको ? हैन, जसपाले एउटा नाममा सहमति गर्छ । हैन, यो त बाहिर चर्चामा आएको मात्र हो । प्रधानम’न्त्रीमा हाम्रो पनि दाबी छ है भनिराख्दा’खेरि दाबेदार को हो भन्ने त स्पष्ट हुनुपर्ला नि ?
हामीले फला’नालाई नै बनाऔँ भनेर हुने गणित हामीसँग छैन । गणित भइदिएको भए हामी फलानालाई बनाऔँ भन्ने थियौँ । यो त के हो भने अरु विकल्पहरु नहुँदा मात्रै हाम्रो’मा आउने हो । यसका लागि त गठबन्धनका सदस्यहरुले ल फलानालाई तपाईंहरुले अगाडि सार्नुभयो भने हाम्रा लागि प्रधा’नमन्त्री स्वीकार्य हुन्छ भनेको अवस्थामा हामी सहमतिको नाम अघि सार्छौं। जसपामा विवाद हुँदैन, हामीले पायौँ भने सहमतिमै व्यक्ति अगाडि सार्छौं । रातोपाटीबाट
अब मास्क नलगाए १ सय रुपैयाँ ज’रिवाना, प्रहरीले थाल्यो सचे’तना कार्यक्रम
कति राम्रो मित्रता, दिलिपलाई वर्षौ पछि भेट्दा निरुताको आँखा र’सायो (भिडियो हे’र्नुहोस)
अनितालाई गुलाफ दिएर ,गालामा लालिको डाम लाइदेउ भन्दै हसाउदै बिनोद (हे’र्नुहोस् भिडियो)
January 6, 2022 admin समाचार 2316
अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडी’लाई नचिन्ने सायदै कम होलान् ।यो जोडी नेपालकै एउटा नमूना जोडीको रुपमा चिनिएको छ । टि`कटकबाट भा’इरल भएको यो जोडीको वास्त’विकता निकै नै मा,’र्मिक र आत्मियताले भरिएको छ ।
April 13, 2021 admin समाचार 6054
सञ्चारकर्मी रवि ला’मिछाने लगायतको सक्रियतामा कालिकोट जिल्लामा बनेको रास्कोट सामुदायिक अस्पताल सञ्चा’लनमा आएको छ । रास्कोट नगरपालिकामा आ’जदेखि सञ्चालनमा आएको सो अस्पतालको उद्घाटनका लागि लामिछाने काली’कोट पुगेका छन् । १५ शैया रहने सो अस्प’तालमा एमबिबिएस
इन्द्रेणीका कृष्ण कंडेल परिवार सहित पहिलोपटक मिडियामा, दस बर्ष सम्म श्रीमती र छोरालाई भेट्न स’केनन् (हे’र्नुहोस रूहाउने अन्तरबार्ता)
April 11, 2021 admin समाचार 5784
पछिल्लो केहि समय एता इन्द्रेणी कार्य’क्रम सर्बाधिक हेरिने कार्यक्रमको रुपमा रहेको छ।सोहि का’र्यक्रमका संचालक तथा इन्द्रेणी समाजका अध्यक्ष कृष्ण कंडेल आफ्नो स-परिवार सहित पहिलो’पटक मिडियामा आएका छन।दोहोरी’को बिकासमा लागेका एक मात्र संचारकर्मीमा उनि मात्रै थिए
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (243733)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (228133)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (197275)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (195610)